Inkonzo yokuBhena yeAmazon, Phinda ufake iAkhawunti yakho ngoku
Ababoneleli ngeNkonzo yokuBhena yeAkhawunti yeAmazon
Kubekho utshintsho olukhulu kwi-e-commerce yomhlaba. Nangona kunjalo, abo baqala kwangoko basenaso isibonelelo sorhwebo oluvuthiweyo. IAmazon yenye yezo ziqonga zaba nguvulindlela kukuthenga kwi-Intanethi. Inkonzo iqalwe ngu Jeff Bezos Ekuqaleni ndaqala ukuthengisa iincwadi. Kwaye, abanye abathengisi bamkelekile nabo. Yaba yindawo yentengiso evulekileyo yabantu abathengisa iimveliso ezahlukeneyo ngokwamanqanaba ahlukeneyo.
Ukuba uhlalutya iAmazon uya kuziva ukuba kufana nenjini yokukhangela iimveliso. Inalo phantse naluphi na uhlobo lwegajethi okanye imveliso onokucinga ngayo. IAmazon isebenza njengendawo enye yayo nantoni na. Nangona kunjalo, oku kufezekisiwe kuninzi lwabathengisi abanxulumene neqonga. Bambalwa kakhulu abantu abasuka kwicala labathengi abazi ngale nto. Kodwa, ukuba ungumthengisi ke uyazi ukuba inani lokhuphiswano likho ngoku.
Kwaye, ngayo yonke into enkulu eyenzekayo, abanye abantu banqwenela ukuvuna izibonelelo kwangoko. Abanye abathengi bazamile ukuxhaphaza iqonga kunye nabathengisi abanqwenela ukufezekisa ukuthengisa ngakumbi ngexesha elincinci. Oku kwenza ukuba iAmazon inyanzelise imigaqo kunye nemigaqo kubathengi bayo kunye nabathengisi. Kodwa, licala lomthengisi elinqunyanyiswa rhoqo kuba bengabenzi bemigangatho. Kwaye, ukuba bayasilela ukwenza njalo okanye bazame naziphi na iindlela ezingeyomfuneko emva koko iqonga linoxanduva lokunqumamisa iakhawunti yabo. Kule meko, umntu unokufaka isibheno kubo kodwa kufanelekile ukujonga inkonzo yokubhena yeAmazon. Ngoba? Kungenxa yokuba amathuba okuba iakhawunti yakho ivuselelwe ngexesha elincinci iphezulu kakhulu kwimeko yokuqala.
Ngoku ukwazi okungakumbi ngenkonzo yokubhena yeAmazon kunye nokumiswa kweakhawunti yomthengisi funda ezantsi.
Funda kwakhona: Ngaba iinkonzo zeZibheno zeAmazon ziyasebenza ngo-2021?
Ngaba ndingavuselela iakhawunti yam yomthengisi ngaphandle kwenkonzo yokubhena yeAmazon?
Lo ngomnye wemibuzo exhaphake kakhulu ebuzwa kuluntu lomthengisi waseAmazon. Abantu ababonelela ngeenkonzo ngenkonzo yokubhena yeAmazon, ngabantu abafana nam nawe. Ayisiyo malunga nokuba ungayenza kodwa ngokusebenza kwayo. Siyinkonzo yesibheno eAmazon kwaye siyazi ukuba ayisosayensi yerokethi. Nangona kunjalo, ukusebenza ngokuchanekileyo nangokuchanekileyo yinto ekufuneka uyikhathalele. Okokuqala, iAmazon ibonelele ngemiyalelo yendlela yokwenza isibheno. Kwaye, ukuba uqinisekile ngokwaneleyo qhubeka.
Kodwa, singacebisa ukuba uwuqonde umba osesandleni kuqala. Ukubhala i Ileta yesibheno eAmazon ayisiyonto inzima kodwa kufuneka uyiqonde ingxaki kwaye uze nesisombululo esifanelekileyo sokujongana nayo. Ngokufanelekileyo, xa iAmazon imisa iakhawunti yomthengisi, ithumela umthengisi isaziso. Kule saziso, bachaza isizathu sokuba iakhawunti imiswe okwexeshana. Ukuba uyayiqonda, zama ukubeka isakhelo ileta exelela iAmazon ukuba ungayisombulula njani le ngxaki. Kwaye, kufuneka uchane kwaye uqonde umba. Kwaye okokugqibela kodwa kungaphelelanga apho, musa ukothuka.
Kwaye, ukuba unqwenela ukukhupha le nto unokuqesha inkonzo yokubhena yeAmazon. Ndiyakuqinisekisa ukuba kufanelekile ukuba utyalomali ingakumbi xa uphulukana neshishini yonke imihla ngexesha lokunqunyanyiswa.
Izizathu zokurhoxiswa kweAkhawunti yoMthengisi weAmazon
Ngenani leemveliso ezandayo eqongeni, inani lezizathu zokuba umntu anganqunyanyiswa liyonyuka. Ngoba? Kuba ngaphezulu kweendlela enye abathengisi banokuphula. Kwaye, kunye noluntu olukhulu kangako, kuyanyanzeleka ukuba kubekho uluhlu kunokuba ibe ngamanqaku nje ambalwa. Ke ngoko ngezantsi sithethe ngezizathu eziqhelekileyo zokumiswa komthengisi waseAmazon:
Iiakhawunti ezininzi: Ukuba uneakhawunti ezininzi zomthengisi kwiAmazon ngamathuba okuba ungafumana ukumiswa. IAmazon ivumela iakhawunti enye yomthengisi kumntu ngamnye. Ialgorithm ye-AI iyakwazi ukujonga iziqinisekiso zakho. Kwaye, ukuba iyahambelana nenye iakhawunti, umntu unokufumana isitrayikhi sokumiswa kwaye unokufuna inkonzo yokubhena yeAmazon.
Uluhlu olungafanelekanga: Ngokwezikhokelo zeAmazon, kukho iimveliso ezithile umntu angenakuzithengisa eqongeni. Oku kunokuba lilizwe elithile okanye kuthintelwe ngokulula yiAmazon, kulo lonke iqonga. Umzekelo e-India ukuthengisa iithoyi zabantu abadala akuvumelekanga kwaye ke akukho mntu uvumelekileyo ukuzithengisa. Kwaye, ukuba ubhaqiwe ubathengisa kwiAmazon ke iakhawunti yakho iya kufumana isibheno sokunqunyanyiswa.
Ukuthengisa iwebhusayithi yakho: IAmazon iyakuvumela ukuthengiswa kweemveliso ezahlukeneyo ezivela kwiimveliso ezahlukeneyo ezinewebhusayithi yazo. Kodwa, ayibavumeli ukuba bathengise iqonga labo le-e-commerce. Ukuba uyayenza emva koko unokufuna inkonzo yokubhena yeAmazon.
Uluhlu lodidi lwe-Inauthentic: Ukuba abathengi badwelisa imveliso yakho njengenyaniso kwaye iakhawunti yakho inokumiswa. Kukho uluhlu oluninzi eAmazon olubanga ukuba luyinyani kodwa alunjalo. Ukuba kunjalo ngemveliso yakho ndiza kukucebisa ukuba uyeke ukuyithengisa.
Uluhlu lodidi lomgunyathi: Le ayisiyongqondo, ukuthengisa nantoni na yomgunyathi akukho semthethweni. IAmazon izibona ithembekile kuzo zonke iimveliso ezidweliswe eqongeni. Ukuba ungumntu othengisa nantoni na ocinga ukuba yeyomgunyathi ze ufumane idatha eyimfuneko malunga nemveliso. Kwaye, ukuba kunokwenzeka yeka ukuthengisa de ufumane ukucacelwa.
Izikhalazo Zokhuseleko: IAmazon ibaluleke kakhulu xa kufikwa kwimigaqo yokhuseleko. Ukuba imveliso yakho iyaphula naliphi na ithuba, qiniseka ukuba uyayilungisa okanye uyeke ukuyithengisa.
Imifanekiso ethintelweyo: Zininzi iintlobo xa kuziwa kwimifanekiso ethintelweyo. Ukuba upose umfanekiso ongabonakali ulungele iqonga emva koko wususe. Kwakhona, omnye akavumelekanga ukusebenzisa umfanekiso wemveliso yomnye umntu. Esi sesinye sezizathu eziqhelekileyo zokurhoxiswa komthengisi. Imibuzo emininzi esiyifumanayo mayela nesi siganeko sinye. Abathengisi bahlala basebenzisa imifanekiso abangenayo imvume kuyo. Ukuba wenza oku ke yima, oku kuthetha ukuba wophula imigaqo-nkqubo ye-IP kwaye uya kufuna inkonzo yokubhena yeAmazon.
Into esetyenzisiweyo Ithengisiwe: IAmazon iyakuvumela ukuthengisa izinto esele zisetyenzisiwe kodwa kudidi oluhlaziyiweyo. Ukuba uthengisa into esele isetyenzisiwe njengokutsha emva koko uphononongo olubi lwabathengi lunokuthatha kwi-cusp yokumiswa. Kuphephe oku kwaye uqiniseke ukuba yonke into oyithengisayo intsha njengomoya.
Izinto eziphelelwe lixesha: IAmazon ikwalikhaya lezinto ezinokonakala. IAmazon idla ngokwaziwa ngezixhobo kodwa ikwathengisa uninzi lwezinye iimveliso. Ukuba uthengisa imveliso ephelelwe lixesha kunokuba yiflegi enkulu ebomvu. Kuya kufuneka ugcine itsheki kwiimveliso ozihambisayo. Qinisekisa ukuba uphatha iAmazon njengalo naliphi na ishishini elisemthethweni. Kuyenzeka ukuba ubuyiselwe kodwa imisebenzi enjalo yenza ukuba kube nzima kwinkonzo yesibheno eAmazon nayo.
Into ayithengiswanga njengoko kuchaziwe: Inkcazo yemveliso ngumba omkhulu kakhulu. Kuyaqondakala ukuba, umntu kufuneka alwe nokhuphiswano olunzima. Nangona kunjalo, ayisosizathu sokufumana iindlela ezimfutshane xa iqonga elidelela kakhulu. Abathengisi abaninzi bachaza amandla emveliso ukubaxwa ngakumbi kunokuba kufanelekile. Ukuba ufumana ingxelo engathandekiyo ngenxa yoko sisiphoso sakho ngokupheleleyo. Inkcazo yenzelwe ukubonisa imveliso yakho ngeyona ndlela ichanekileyo kunye nenyani. Kwaye ndithembe, yindlela yokuba namava amashishini agudileyo eqongeni. Ke ngoko, ukuba awufuni kuqesha inkonzo yokubhena yeAmazon ngokukodwa ukubuyiselwa kwakhona kwaye uyiphephe kuzo zonke iindleko.
Ixabiso eliphezulu leNqanaba eliPhezulu: I-ODR okanye i-Order Defect Rate yipesenti yee-odolo ezineziphene ezithunyelwa nguwe. Ityala elibi emehlweni eqonga. Ngokufanelekileyo, iAmazon ivumela i-ODR ukuba ingabikho ngaphezulu kwe-1%. Ke ngoko, ukuba ufumana nasiphi na isikhalazo malunga nemveliso enesiphene, qiniseka ukuba uyayilungisa ngaphambi kwexesha.
Amava aphezulu kubathengi (NCX): Ukuphononongwa kwabaThengi sisipili sohlobo lwenkonzo oyinika abathengi bakho. Ukuba uhlala ufumana uphononongo olubi amathuba okuba imveliso iyimpazamo. Ukuba oku kuyenzeka kuwe ke thabatha amanyathelo kwangoko. Ngokufanelekileyo, njengenkonzo yokubhena yeAmazon, sicela abathengi bethu ukuba benze okufanayo. Kulula ukutshintsha into oyithengisayo kunokulahlekelwa yiakhawunti yakho yomthengisi.
Ke ezi zezinye zezizathu eziqhelekileyo zokurhoxiswa komthengisi. Ukuba ukrokrela ukuba iakhawunti yakho inokuphazamisa nabani na phakathi kwayo jonga i-ASAP. Ngaphandle koku, kuhlala kukho amaxesha apho iakhawunti imisiwe ngenxa yezizathu ezininzi. Kunokuba nzima ukuyisombulula kodwa wenze uphicotho-zincwadi lwakho ngokucokisekileyo kangangoko kunokwenzeka. Kwaye uthathe amanyathelo nge-ASAP, ukushiya kulungiselela ikamva kunokufumana uqhankqalazo. Kwenzekile nabanye babathengi bethu kwixa elidlulileyo kwaye kunokwenzeka nakuwe.
Iakhawunti inqunyanyisiwe? Sitsalele umnxeba ngoku!
Ingakunceda njani inkonzo yakho yezibheno?
Xa uthetha ngenkonzo yokubhena yeAmazon, ileta yesibheno idlala indima enkulu kuyo. Ileta yesibheno eAmazon kuphela konxibelelwano phakathi kwakho neAmazon olunokuthi lubuyisele iakhawunti yakho. Ukuba ayifakwanga kwicala elifanelekileyo oko kungathatha ixesha. Ngokusisiseko, esi sizathu sokuba abantu abaninzi kangaka ukuqesha i-Amazon Appeal Service. Njengoko bekutshiwo ngaphambili, kulula ukuba i-akhawunti yakho ibuyiselwe kumzamo wokuqala. Ngaphandle koko, kunokuthatha ixesha elininzi kwaye kunokuphela kuphulukana nemithwalo yeshishini.
Ngoku, ukuba siqhubeka nokuthetha ngalo mbandela ileta yesibheno eAmazon sisitya esiphambili kodwa eyona nto iphambili sisiCwangciso sokuSebenza. Isicwangciso sokusebenza ngamanyathelo afanelekileyo esiya kuwathatha ukulungisa umba owaziswe yiAmazon. Ukwenza njalo, kukho izinto ezimbalwa esizithathela ingqalelo:
Funda isaziso esithunyelwe yiAmazon ngononophelo.
Fumana umbono ocacileyo malunga nomba osondeleyo kunye nendlela iakhawunti yakho eyaphula ngayo.
Ngoku yenza amanyathelo afanelekileyo, ukuba uza kuwalungisa njani.
Kuyinto ebanzi kakhulu kunale kodwa la manyathelo zezona zithako ziphambili. Kwakhona, lonke ukubuyiswa kwahlukile, ke ngoko, kubalulekile ukuba sinike ingqalelo kulowo nalowo ekubuyisweni kwakhe ngokwahlukileyo. Nangona kunjalo, amava ethu kwezi ahlala esenza kube lula kuthi ukuba siphathe nasiphi na isicelo.
Jonga iiNkonzo zethu zokuNqunyanyiswa kweAmazon
Emva kokuba sigqibile ukwenza isicwangciso sokwenza umbuzo othile, siqhubeka nokubhala ileta yesibheno eAmazon. Iyafana nayiphi na enye ileta kodwa eyahlukileyo kancinci. Injongo kukuthetha kangangoko kuncinane kangangoko kunokwenzeka. Kwaye ngaphezulu kwayo, yenziwa kancinci. Ke ngoko, apha ngezantsi ezinye zeendlela esizilandelayo:
Ukucacisa kunye nokuchaneka: Njengoko kukhankanyiwe ngasentla, "Thetha ngakumbi ngamagama ambalwa". Zininzi izibheno ezifunyanwa yiAmazon yonke imihla. Ke ngoko, kubalulekile ukuba sikhankanye yonke into ngendlela elula. Kwaye uzame ukuyenza ibe mfutshane ngokwaneleyo ukuba ummeli afunde ngokulula.
Isicwangciso sokusebenza: Kuba sele size nesicwangciso sokwenza, ngoku lixesha lokuba sichaze ngokufanelekileyo. Sizama ukusebenzisa amanqaku eebhulethi ukwandisa ukusebenza xa kusenziwa ukuskena unobumba. Kwaye ngaphezulu kwayo, amanqaku onke abonisa ngokucacileyo ukuba ngawaphi amanyathelo esiza kuwathatha.
Ulwakhiwo: Yonke into ebhaliweyo sisiqwenga sebali esinebali. Sikuthetha oku kuba ingxelo ebalulekileyo. Siyaqinisekisa ukuba sikhankanya yonke into ngokulandelelana kwayo kwaye sithatha umbandela ngamnye kunye nomcimbi ngamnye sichaza ukuba kuya kujongwana njani nawo
Ubizo: Kubalulekile ukugcina ithoni yeleta ngokujonga. Umntu kufuneka aqonde ukuba amandla okuthengisa kwiAmazon lithuba. Ukugcina le ngcinga, ileta yonke iyakhiwa. Kubalulekile ukuba uqonde ukuba le mithetho kunye nemimiselo yenzelwe abathengisi ngokwabo ekuhambeni kwexesha. Ukuba ungumntu osebenza nzima ngokunyanisekileyo uzama ukwenza indlela yakho yokuphila ngendlela eyiyo uya kusiqonda isizathu sokuba oku kwenzeke.
Njengenkonzo yokubhena yaseAmazon, siluthatha nzulu ulwakhiwo lwesibheno. Olu lolunye lweembopheleleko zethu ezingundoqo kwaye siyaluthatha buqu.
Ixesha elifanelekileyo lokuBuyiselwa kweAkhawunti yoMthengisi
Akukho nto ichaziweyo nexesha. Njengoko kukhankanyiwe ngaphambi kokuba lonke ukubuyiselwa lubonakale ngokwahlukileyo. Sibonile amaxesha apho iileta zethu zokubhena ziye zabuyisela iiakhawunti ngaphakathi kweeyure ezingama-24. Nangona, ukuba umthengi uza kuthi ngasese ezama ileta yokubuyiselwa, ukubuyiselwa kungathatha ixesha. Ngezibheno zeAmazon, okokuqala ngumtsalane, ke, qiniseka ukuba ileta yokubhena ye-amazon ilungile ngokwaneleyo okokuqala ngqa.
Ungakuphepha njani ukumiswa kweakhawunti kwixa elizayo?
Zimbini iindlela umntu anokukwenza ngazo oku. Eyokuqala kukuba usebenze malunga nayo yonke into kunye nayo yonke into. Okwesibini kukuqesha inkonzo yokubhena yeAmazon. Zininzi iinkonzo ezibandakanya nathi ezibonelela ngokuthintela ukunqunyanyiswa. Alithandabuzeki elokuba kunokuba yingxaki ukuphatha imisebenzi emininzi ngaxeshanye. Esi sizathu sokuba abathengisi abaninzi basebenzise ngaphandle ukugcinwa kweakhawunti yabo yomthengisi kwiinkonzo zokubhena zeAmazon.
Ukuba ungumntu okhangela inkonzo yokubhena yeAmazon mhlawumbi sinokunceda. Sinikezela ngeenkonzo ezinje ngokuthintela ukunqunyanyiswa kwabathengisi, ukujonga impilo rhoqo kwiakhawunti, kunye nokukhuthaza intengiso. Ke ngoko, ukuba unomdla ufumane ukubonisana kwakho simahla ngu ngokunqakraza apha.